စင်မြင့်ထက်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ စွမ်းဇာနည်က ပရိတ်သတ်ကြီးကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ဖို့ ဘာတွေလျှို့ဝှက်ထားလဲဆိုတော့–။ – Shwe Ba
စင်မြင့်ထက်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ စွမ်းဇာနည်က ပရိတ်သတ်ကြီးကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ဖို့ ဘာတွေလျှို့ဝှက်ထားလဲဆိုတော့–။
ကဲ-ပရိသတ်ကြီးရေ.. ပရိသတ် အချစ်တွေကို အခိုင်အမာရရှိထားကြတဲ့ ပြည်သူ့အသည်းကျော် ဇာတ်သဘင် အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ မင်းသားချောလေး စွမ်းဇာနည်ကတော့ ထိပ်တန်းကနေ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအောင်မြင်နေတဲ့ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။စွမ်းလို့ အားလုံးက ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ မင်းသားချောလေး စွမ်းဇာနည်ဟာ ဇာတ်သဘင်ပိုင်းမှာအောင်မြင်နေသလို သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း ဇာတ်ကားတွေ အများအပြား ရိုက်ကူးထားပြီး ပရိသတ်တွေကို သဘောကျစေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ် အချစ်တွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ စွမ်းကတော့ Covid ကာလ အနုပညာအလုပ်တွေ နည်းပါးနေတဲ့အချိန်မှာလည်း သူ့ရဲ့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို အမြဲမျှဝေလေ့ရှိကာ အလှူအတန်းတွေကိုလည်း မကြာခဏဆိုသလို ပြုလုပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာလည်း စွမ်းတစ်ယောက်က ဇာတ်ကပြဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး ချစ်ရသူလေးတွေနဲ့ အတူ ဇာတ်စင်ပေါ်မှာပျော်ခဲ့တဲ့ အခိုက်အတန့် အမှတ်တရလေးတွေကို ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အလွမ်းပြေလေးေဝမျှကာ အချစ်ပိုစေပြန်လိုက် ပါတယ်နော်..။
“Today Shooting Ko A The’ Tway Nae …. ❤️..” ဆိုပြီး ဇာတ်စင်ပေါ်က အမှတ်တရလေးတွေကို စွမ်းက ပရိသတ်တွေကို ဝေမျှထားတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း အားပေးချစ်ခင်ကြတာတွေ့ ရပါတယ်နော်..။ ပရိသတ်တွေ အားပေးမှုတွေတစ်ခဲနက် များပြားခဲ့ပြီး ပျော်ခဲ့ရတဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုမှတ်တိုင်လေးတစ်ခုကိုေဝမျှရင်း ပျော်နေတဲ့စွမ်းရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း တင်ဆက်ပေးလိုက် ပါတယ်နော်..။
ကဲ-ပရိသတ္ႀကီးေရ.. ပရိသတ္ အခ်စ္ေတြကို အခိုင္အမာရရွိထားၾကတဲ့ ျပည္သူ႔အသည္းေက်ာ္ ဇာတ္သဘင္ အႏုပညာရွင္ေတြထဲမွာ မင္းသားေခ်ာေလး စြမ္းဇာနည္ကေတာ့ ထိပ္တန္းကေန ဒိတ္ဒိတ္ၾကဲေအာင္ျမင္ေနတဲ့ သူပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။စြမ္းလို႔ အားလုံးက ခ်စ္စနိုးေခၚၾကတဲ့ မင္းသားေခ်ာေလး စြမ္းဇာနည္ဟာ ဇာတ္သဘင္ပိုင္းမွာေအာင္ျမင္ေနသလို သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္းမွာလည္း ဇာတ္ကားေတြ အမ်ားအျပား ရိုက္ကူးထားၿပီး ပရိသတ္ေတြကို သေဘာက်ေစသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။
မိန္းကေလး ပရိသတ္ေတြရဲ့ သည္းသည္းလႈပ္ အခ်စ္ေတြကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ စြမ္းကေတာ့ Covid ကာလ အႏုပညာအလုပ္ေတြ နည္းပါးေနတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း သူ႔ရဲ့ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈေလးေတြကို အျမဲမၽွေဝေလ့ရွိကာ အလႉအတန္းေတြကိုလည္း မၾကာခဏဆိုသလို ျပဳလုပ္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။အခုတစ္ခါမွာလည္း စြမ္းတစ္ေယာက္က ဇာတ္ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၿပီး ခ်စ္ရသူေလးေတြနဲ႔ အတူ ဇာတ္စင္ေပၚမွာေပ်ာ္ခဲ့တဲ့ အခိုက္အတန႔္ အမွတ္တရေလးေတြကို ခ်စ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ အလြမ္းေျပေလးေဝမၽွကာ အခ်စ္ပိုေစျပန္လိုက္ ပါတယ္ေနာ္..။
“Today Shooting Ko A The’ Tway Nae …. ..” ဆိုၿပီး ဇာတ္စင္ေပၚက အမွတ္တရေလးေတြကို စြမ္းက ပရိသတ္ေတြကို ေဝမၽွထားတာျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ေတြကလည္း အားေပးခ်စ္ခင္ၾကတာေတြ႕ ရပါတယ္ေနာ္..။ ပရိသတ္ေတြ အားေပးမႈေတြတစ္ခဲနက္ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး ေပ်ာ္ခဲ့ရတဲ့ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈမွတ္တိုင္ေလးတစ္ခုကိုေဝမၽွရင္း ေပ်ာ္ေနတဲ့စြမ္းရဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြကိုလည္း တင္ဆက္ေပးလိုက္ ပါတယ္ေနာ္..။
Previous post အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီး ဇာတ်ရုပ်နဲ့လိုက်အောင် အရှက်ကိုဘေးချိတ်ပြီး သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရကြောင်း ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်ကပြောလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
Next post ဘေဘီမောင်ကတော့ သူမ ဘငမှာ အရွံဆုံးမိန်းမတစ်ယောက်အကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောလိုက်ပြီ။